Adgbaso ihe ọhụrụ, na-eso ije na Times, ịchụso mmụọ zuru okè nke ụlọ ọrụ MAXIMA na-eme mgbalị dị ukwuu izute ahịa ina na mgbe niile ọhụrụ, mgbe niile n'ofè. MAXIMA nọ na-arụ ọrụ na nkwalite Nrụgide Ọrụ Ikuku Kọlụm Nwelite na okwu ...
Na 2018 Automechanika Frankfurt, ụwa taa na-eduga ahịa ngosi maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụgbọ ala, MIT AUTOMOBILE SERVICE CO, LTD (MAXIMA), nke dị na Hall 8.0 J17, guzo nha: 91 sqm. ẹkenam ọgụgụ isi oké ọrụ-ebuli ngwaahịa, oghere a ọhụrụ ebe nke Platform Lif ...
Nrụ Ọrụ Dị arọ Platform ebuli, jiri ya tụnyere Mobile kọlụm lifts, nwere ike ikwe ka ngwa ngwa na-aga na & anya. Ọtụtụ ọrụ na ụgbọ ala azụmahịa bụ nnwale & mmezi dị mfe, nke ekwesịrị ịkwụsị ngwa ngwa. Site na nbudata n'elu ikpo okwu, onye ọrụ nwere ike ịnagide ọrụ ndị a nke ọma, nke nwere ike ịchekwa y ...